Nezvedu - Shanghai H & H Hotmelt Adhesives Co., Ltd.
H & H kambani nhoroondo
Jiangsu Hehe Nyowani Zvishandiso Co, Ltd. Shanghai Bazi isangano rakagadzwa muShanghai seyekutengesa dzimbahwe reHehe Nyowani Zvishandiso, yakatsaurirwa mukuvandudza uye kugadzirisa kwepasirese kutengesa network yezvinhu zveHehe. "Hehe Hot Melt Adhesive" brand yakavakwa zvine hungwaru uye nekuchengetwa nechikwata kweanopfuura makore gumi uye rave rinopisa rinonyungudika chinamatira mhando ine mukurumbira wepamusoro uye mukurumbira muindasitiri. Iyo yakavaka yekugadzira uye yekugadzirisa hwaro hweanopfuura 10,000 mativi metres muJiangsu Qidong Binhai Industrial Park uye Hehe; ine matavi kana makambani akabata muWenzhou, Hangzhou, Fujian uye Guangdong yekupa rutsigiro rwevatengi 'inopisa inonamira kunamatira kunyorera nekukurumidza. Seye-tech-tech bhizinesi rekubatanidza R&D, kugadzirwa nekutengesa, uye nekubatanidza zviwanikwa zveR & D zvepasi rose mumunda weinopisa zvinonamatira zvinonamatira, Hehe anoenderana neazvino ekuvandudza maitiro eanopisa anyauka kunamatira maficha munzvimbo dzakasiyana siyana uye inogadzira yakasarudzika uye inozivikanwa inopisa inyauka zvinonamatira. Iyo membrane application yekutsvagisa uye yekuvandudza chikuva chakaumba "epamba anotungamira, epasi rose akawiriraniswa" tekinoroji yekuvandudza sisitimu inosanganisa kugadzirwa, kudzidza uye kutsvagisa, uye yanga iri pamberi pamusika mukushandisa uye nekuwedzera kweanopisa anyauka anonamira mafirimu.
H & H simba
Yedu inopisa inyauka inonamatira firimu zvigadzirwa zvine inotungamira musika chinzvimbo mumunda weshangu zvinhu zvinopisa glue kubatanidza, zvemagetsi zvigadzirwa, zvemauto yunifomu yekugadzira, zvekushongedza zvinhu, zvisina-kutara zvipfeko zvemukati uye mimwe minda, kushandira hombe yakawanda inozivikanwa inozivikanwa yekumba neyekunze. mabhureki uye zvakasiyana zvigadzirwa Izvo zvinogona kutsiva zvakaunzwa zvigadzirwa zvakafanana. Kubudirira kukuru kwakaitwa mukuvandudzwa uye kushandiswa kwekutsiva glues yechinyakare isiri-yezvakatipoteredza, inozovandudza zvakanyanya kukanganisa kwezvinhu zvakasiyana-siyana pahutano hwevanhu uye nharaunda.
Izvo zvatinotengesa hazvisi zvigadzirwa chete, asi kugadzira zvimwe zvakawedzera kukosha uye masevhisi kune vatengi uye nzanga.
H & H kukudzwa
Iyo kambani yapfuura iyo SGS ISO9001 yemhando yepamusoro sisitimu sisitimu, uye zvigadzirwa zvakapfuura iyo yekuchengetedza chengetedzo chitupa. Hehe vanhu vagara vakanamatira kune bhizinesi uzivi hwe "mutengi kutanga, sekufamba pamusoro pechando chitete", Nebasa rekuvandudza re"kushandisa uye kusimudzira inopisa-yekubatanidza tekinoroji kuti hupenyu huve hutano uye nani", inogara ichivandudza nekukura, yakasimba mhando zvinodiwa uye kutonga, will hehe Chiratidzo chinoramba chichishanda nesimba kuti chive chivimbo chepasi rose chakakurumbira chinopisa chinonamatira chinamatira.